Waa maxay tikidhada wareega AnkaraKart? Halkee Iibsataa AnkaraKart? Khidmadaha AnkaraKart | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraWaa maxay tikidhada wareega AnkaraKart? Halkee Iibsataa AnkaraKart? Khidmadaha AnkaraKart
Waa maxay tikidhada wareega ankarakart halka laga iibsado lacagta ankarakart ankarakart
AnkaraKart waa kaarka magaalada ee gaadiidka lagu qaado oo markasta aad sidato. AnkaraKart wuxuu ka kooban yahay kaararka smart-ka ah ee aan lala xiriirin ee loo adeegsan karo iyadoo loo soo dhaweynayo aaladda akhriga kaararka dhammaan gawaarida gaadiidka dadweynaha ee ku xiran EGO, iyo AnkaraKart, oo ka kooban tikityo hal magnetic magnetic ah oo lagu dhejiyay qeybta aqrinta kaarka sare ee aaladahaan.
Rakaabyada u rogi kara istcimaalayaasha isticmaalaya AnkaraKart iyo kaararka amaahda ee aan lala xiriirin ee baska, nidaamyada tareenka iyo khadadka gawaarida fiilooyinka waxay awood u yeelan doonaan inay u beddelaan taleefannada mobilada beddelka labadan kaar.
Thanks to Tigidhada Mobilka (CEP BİLET), martida imaata Ankara, qaasatan 'Halkee ayaan ka iibsan karaa AnkaraKart?' ama 'Xagee baan kugaaraa dheelitirka AnkaraKart?' ma yeelan doonaan yaraanta.
“Markaan dusha ka saarno aaladda NFC (U dhow Field Isgaarsiinta) muuqaalada taleefanka gacanta, www.ankarakart.com.t waa Waxay u baahan yihiin inay aadaan websaydhka oo ay arjiga ku soo dejistaan ​​taleefannadooda gacanta, iyo tallaabada xigta ee ay u baahan yihiin inay ka qaadaan dheelitirka kaarka bangiga illaa kaarka dalwaddu. Macaamiishaas ka dib, marka rakaabku u soo qaadaan taleefannadooda moodeellada leh astaamaha akhrinta kaarka, xiriirku wuu shaqeynayaa oo qadarka 4 TL, oo ​​ah kaadh raacitaan ayaa laga goyn doonaa kaararka mobilada.
Sidee Loo Isticmaalaa AnkaraKart Tigidhada Mobilada (Tigidhada jeebka)?
Markaad isticmaalayso taleefannada NFC-karti ku leh gaadiidka dadweynaha;
Codsiga NFC ee taleefankaaga waa inuu furaa,
Si loo isticmaalo dalabka NFC www.ankarakart.com.t waaWaa inaad xubin ka noqotaa
Marka la dhammeeyo hawsha xubinnimada, qaybta kaarka dalwaddu ayaa la soo bandhigi doonaa, oo haddii aad ugu yaraan 4 kaar u hesho qaybtaan, waad sameyn kartaa fuulista.
Marka la soo dejinayo, waad iska diiwaangelin kartaa kaarkaaga deynta, kaararka deynta ee nidaamka, si dhaqso leh ayaad iskugu dheellitiran kartaa oo aad u isticmaali kartaa dheelitirkaaga nidaamkaaga,
Ka dib marka aad ku dhejiso kaadhkaaga dalxiiska ah, waad dhaqaajin kartaa ikhtiyaarka adiga oo dooranaya gaadiidka / badhamada badeecadaha aad rabto inaad isticmaasho,
Markaad dhaqaajiso ikhtiyaarka gaadiidka; Waad uga faa’ideysan kartaa adeegga adoo ku dhaweynaya qaybta ay ku qoran tahay codsiga NFC ee taleefanka ansixiyaha,
Codsigan, kharash kasta oo adeegsi waa 4 TL,
Xitaa haddii aadan la socon taleefankaaga qaaska ah, waad gali kartaa oo waad ka isticmaali kartaa taleefan kale adoo adeegsanaya isticmaale-magac iyo isgarad,
Markaad gasho teleefoon aan ka diiwan gashanayn, lambar sir ah ayaa loo diri doonaa taleefankaaga diiwaangashan nabadgelyada macluumaadka shaqsiyeed. Kadib xaqiijinta lambarka sirta ah, waxaad uheleysaa macaamil xawaalad isla markaana waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa adeegyada gaadiidka.
Halkee Loo Isticmaalaa Ankarakart
AnkaraKart waxay raacdaa dhamaan basaska ku xiran EGO, Metro, Ankaray iyo Cable Car.
Waa maxay Noocyada Motherboard-ka?
Waxaa jira 4 nooc oo tikidhada moobiilka ah ee Ankarakart. Waxaa laga heli karaa Xarumaha Processing Card ee Ankara, iibiyaasha Kaarka Ankara iyo aaladda SmartBanko. Noocyada AnkaraKart waa sida soo socota:
Waa kaar gaadiid oo aad ugu adeegsan karto dhammaan gaadiidleyda dadweynaha ee Ankara adoo ka xaraysanaya TL qalabkayaga ka ganacsada, aaladda Smart ama Mini Banko. Waxaad ka iibsan kartaa kaarkaaga Ankara ka buuxa ganacsadeyaasheena, Xarumahayaga Kaaraynta Ankara ama Xarumaha Smartka. Si looga faa iideysto faa'iidooyinka AnkaraKart, waad u shaqaaleysiin kartaa AnkaraKart adiga oo ku aqoonsanaya AnkaraKart akaawnkaaga ka dib markii aad iibsato AnkaraKart buuxa oo aad ka soo iibsato Qaanuunka Khadka Tooska ah> Qeexitaanka Kaarka.
AnkaraKart buuxa waa kaar qarsoon. Adiga oo shakhsi ahaantaada kaarkaaga ka siiya liiska macaamiisha khadka tooska ah, waxaad isku dheelitirnaan kartaa isku dheelitirkaaga cusub ee AnkaraKart haddii ay dhacdo wax khasaare ama tuugo ah.
Qiima dhimis AnkaraKart
Kuwani waa kaararka shaqsiyeed ee ay heleen ardayda iyo macallimiinta iyaga oo ka codsanaya Xarummaha Kaararka Ankara oo wata dukumentiyada hoos ku taxan. Adeegsiga kaararkaan shaqsiyadeed waa ka mamnuuc kuwa kale. Xaaladaha noocaas ah, kaarka waa lala wareegaa oo liiska madow ayaa lagu diiwaangeliyaa.
Waxaad ka heli kartaa liistada dukumentiyada aad u baahan tahay inaad heysato markaad iibsaneyso kaarka dhimista Xarumaha Kaadhadhka Kaadida Ankara.
Dukumentiyada loo baahan yahay (Macallin)
Macalinka codsadaha waxaa la weydiinayaa lambarka aqoonsiga TR / Aqoonsiga Dibadda ee nidaamka. Iyadoon loo baahnayn in la keeno dukumiinti ka socda macallimiinta diiwaangashan, sawirkooda ayaa la sawiranayaa kaarkoodiina waa la daabacay oo qofka loo geeyaa.
Macallimiinta aan ka diiwaan gashanayn wareysigu waa inay dhammaystiraan dukumintiga soo socda si ay u helaan Sicir-dhimis AnkaraCard;
1 Magac. Sawir Baasaboor
Dhanka MEB; Koobiga mushaarka ama Aqoonsiga macalinka
Macallimiinta aan Helin Kaararka Casriga ah
Tababar (Musharrax) Macallimiinta
4 / C macallimiinta (Macallimiinta lacagta la siinayo)
Casharrada Master iyo Khabiirka
Jimicsiga jimicsiga jirka, cilminafsiyaqaanka iwm. kuwa shaqeeya
Macallimiinta dugsiga gaarka loo leeyahay
Xannaano-maalmeedyada gaarka loo leeyahay iyo barayaasha xanaanada
Kuwa ku tababbaraya meelaha leh nooca kooraska (Fasalka, iskuulka wadista iwm.)
Xubnaha kuliyada iyo tababarayaasha kale ee jaamacadaha
Dukumentiyada loo baahan yahay (Arday)
Ardayda raba inay ka faa iidaystaan ​​AnkaraKart dhimis waa inay dhammaystiraan dukumintiga soo socda;
Ardayda Dugsiga Sare iyo Jaamacadaha Furan;
Shahaadada ardayga ee sanad dugsiyeedka cusub
FIIRO GAAR AH: Shahaadada ardayga waa in la helay, la shaabadeeyey oo la oggolaaday bishii la soo dhaafay.
Ardayda Dugsiga Hoose, Sare iyo Sare;
FIIRO GAAR AH: Aqoonsigu waa inuu kujiro Lambarka Aqoonsiga Turkiga / Lambarka Aqoonsiga Dibadda.
AnkaraCard bilaash ah
Kuwani waa kaarar ay siisay Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara dadka u baahan ama shaqaalaha xarumaha qaarkood, waxayna bixiyaan kaarka bilaashka ah ama kumeelgaarka ah. Kaararka Ankara oo bilaash ah waxaa laga helaa Xarumaha Kaadinta.
Dukumentiyada lama huraanka ah (Halyeeyga iyo Afadiisa, Shuhadada Carmallada iyo Agoonta)
Gazi iyo afadiisa, Martyr Widow iyo agoonta ee raba inay ka faa'ideystaan ​​AnkaraCard Bilaash waa inay buuxiyaan dukumentiyada soo socda;
Sawirrada halyeeyadii hore iyo xaasaskooda, Shuhadada Carmallada ah iyo agoonta, oo ay mushaar siisay Ururka Agaasinka Guud ee Hawlgabka, kaararka Aqoonsiga oo leh weedha "BILAASH".
Nuqul kaararka aqoonsiga.
1 sawir baasaboor.
Dukumentiyada lagama maarmaanka ah
Kuwa haysta Kaarka Saxaafadda ee loo yaqaan 'Yellow Press Card' ee doonaya inay ka faa'ideystaan ​​AnkaraKart Bilaashka ah waa inay buuxiyaan dukumintiga soo socda;
Nuqul kaararka huruudda ah ee saxaafadda ee ay soo saartay Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo Agaasimaha Guud ee Warfaafinta.
Dukumentiyada loo baahan yahay (Shaqaalaha Nooca Adeegyada Badbaadada)
Shaqaalaha Qaybta Adeegyada Bileyska ee raba inay ka faa'ideystaan ​​Kaarka Ankara ee Bilaashka ah waa inay buuxiyaan dukumintiga soo socda;
Nuqul kaararka aqoonsiga oo uu soo saaray Agaasimaha Guud ee Amniga.
Dukumentiyada loo baahan yahay (Booliska degmada)
Booliska degmada, oo raba inay ka faaiideystaan ​​Kaarka Ankara ee Bilaashka ah, waa inay buuxiyaan dukumintiga soo socda;
Warqad codsi muujineysa macluumaadka shaqaalaha in laga qaadayo machadka ay ku lifaaqan tahay.
Nuqul Kaararka Aqoonsiga Booliiska ee Degmooyinka ayaa soo saaray.
Isticmaalka-At AnkaraCards waa kaararka gaadiidka hal-pass. Kaar kasta oo la tuuri karo ayaa looga baahan yahay kaar walba.
Isticmaalka Kaarka Ankara oo buuxa, Qiimo Geliyay iyo Bilaash
Si aad u raacdo gaadiidka dadweynaha ee Ankara oo aad la socoto AnkaraKart, waxaa kugu filnaan doonta inaad AnkarKart u soo dhoweyso aaladda akhriga kaararka ee gaadiidka dadweynaha ama saldhigyada. Macaamilkaaga si dhakhso leh ayaa loo socodsiin doonaa isla markaana khidmadda gaadiidka ee ay go’aamisay degmadu ayaa laga goyn doonaa dheelitirkaaga xamuulka ah ee ku yaal AnkaraKart, taas oo kuxiran astaamaha AnkaraKart. Waxaa la fahamsan yahay in qiimaha gaadiidka ee aaladda akhriga kaarka lagu bixiyo sanqadha iyo nalka cagaaran ee xaqiijinaya aqrinta kaarka. Waxa kale oo aad ku arki kartaa dheelitirka haray kaarkaaga shaashadda aaladda qalabka wax aqrinta.
Waxaad si dhakhso ah ugu bixisaa lacagtaaga, casri ahaan iyo dhaqaale ahaan AnkaraKart-kaaga. Waad ku mahadsan tahay AnkaraKart, waxaad heleysaa fursad aad ku dhaafi karto oo aad ku deg degto safarka adigoon wax lacag ah kala kulmin qadaadiicda isla markaana aad la kulanto dhibaatooyin sida aadan u helin tikidhada.
Isticmaal-Tuur Ankara Card Use
Noocyada AnkaraKartIHaddii aad leedahay Adeegsi-AnkaraCard, waa inaad ku dhejisaa AnkaraCard baakada korkeeda isla aaladda aqrinta kaarka, waana inaad soo celisaa ka dib dhawaaqa xaqiijinta ee ka yimaadda aaladda. Waa inaad haysataa Adeegga-AnkaraKart inta lagu jiro safarka oo dhan.
Maxay tahay in la tixgeliyo markii la isticmaalayo Ankarakart!
Ha uga tagin AnkaraKart qorraxda tooska ah. Heerkulka shaqada ee AnkaraKart wuxuu u dhexeeyaa -20 digrii iyo 50 digrii. Waa inaad ka ilaalisaa AnkaraKart ilaha kuleylka.
AnkaraKart TypesAnkaraCard ma saameeyo meelaha elektaroonigga ah sida taleefannada gacanta, raadiyaasha iyo telefishanka.
Noocyada AnkaraKart U isticmaal maro jilicsan si aad u nadiifiso dusha sare ee AnkaraKart. Ha u isticmaalin kiimikooyinka dunta leh iyo kiimikooyinka sida cologne, alkolo, dusha ka khafiifsan.
Noocyada AnkaraKart TypeAnkaraCard waxay noqon kartaa mid aan caadi ahayn haddii la jabiyo, goyn, kala goys, jeexan, saamaynta saamaynta adag ay ku leedahay dusha kaararka, laablaabashada, is-laabashada ama foorarka.
Noocyada 'AnkaraKart TypesDga ha u qaadin' AnkaraKart 'adiga oo aan haysan weel ilaalin ama xayndaab si aad uga hortagto inuu laabo ama jabto.
Nidaamyada Visa Ankarakart
Qaababka fiisooyinka ee kaararka loo bixiyo iyadoo la raacayo go'aanka Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara waa sida soo socota;
ardayga: Waqtiga Visa ee kaararka ardayda 30.09.2018 wuu dhacayaa. Dukumentiyada looma baahna kuwa xaq u leh inay noqdaan arday ku jira diiwaangelinta MEB iyo YÖK. Xawaaladda kuwa aan diiwaangashanayn waxaa lagu sameeyaa shahaadada ardayga oo shaqeyneysa lixdii bilood ee la soo dhaafay ama kaarka aqoonsiga ardayga ee sannad dugsiyeedka khuseeya. (Ardayda OEF ma awoodaan inay ku shaqeystaan ​​baandooyinka.)
Macallinka: Waqtiga Visa ee kaararka macallimiinta 30.09.2018 wuu dhacayaa. Macaamillada waxaa lagu fuliyaa kaararka Aqoonsiga Wasaaradda Waxbarashada Qaranka ama dukumeentiga caddeynta ballanta ee laga helay maamulka degmada. Lacagta fiisaha waxaa loo habeeyay sida ku xusan go'aanka Magaalada Caasimadda ah ee Ankara waa 60,00 TL.
Kaarka Bilaashka ah
61-64 Da'da: Muddada Visa ee dadka haysta kaarka bilaashka ah ee jira 61-64 31.12.2018 wuu dhacayaa. Sida ku xusan diiwaannada MERNIS, nidaamka fiisaha waxaa lagu dabaqayaa muwaadiniinta deggenaansho ku leh Ankara. Khidmada fiisaha waxaa loo habeeyay sida ku xusan go'aanka Golaha Deegaanka ee Ankara Metropolitan Municipal waa 135,00 TL. (Waxaa la bixiyaa markii da'da 61 buuxsato.)
65 sano: Kontroolka Visa oo jira 65 sano, saxaafadda iyo kaararka naafada waxaa si otomaatig ah u sameeya nidaamka. (Waxaa la bixiyaa markay 65 sano buuxsato.)
Shaqaalaha dadweynaha iyo TUIK: Waqtiga Visa ee kaararka shaqaalaha iyo TURKSTAT 31.12.2018 wuu dhacayaa. Shaqaalaha xarumahaan waa inay ku dalbadaan warqad warqad ah si ay kaarkooda uga dhigaan fiisada. Ujrada fiisaha ee kaararka TUIK ee la soo saaray iyadoo la raacayo go'aanka Golaha Magaalada Caasimadda ee Ankara waa 70,00 TL.
Shaqaalaha EGM: Kuwa ku yimaada Ankara ee leh waajibaadka ku meel gaarka ah ee EGM waxaa la siiyaa kaar shaqeynaya ilaa 2 bilood ka dib taariikhda kaarka la siinayo. Haddii la doonayo in fiiso loogu sameeyo kaarka mar kale dhamaadka muddadan, adeegga shabakadda EGM ayaa la isweydiinayaa kaarkana waxaa loo dheereeyay 2 bilood. Hawsha fiisaha ee shaqaalaha EGM waxa lagu sameeyaa kaadhka Aqoonsiga EGM.
Halkeen Ka Iman Karaa Ankarakart?
Xarumaha Macaamilaadda AnkaraCard waxaa loo sameeyay gaar ahaan dadka xaq u leh in la Qiimeeyo iyo AnkaraCard Bilaash ah si ay si dhib yar ugu fuliyaan kaararka. Intaa waxaa sii dheer, waxaad u diri kartaa dhammaan su'aalahaaga, cabashooyinkaaga ama dhibaatooyinka la xiriira AnkaraKart xarumahaan ama waxaad ka heli kartaa taageero xagga xallinta.
Waad la xiriiri kartaa Xarumaha Macaamil ee AnkaraKart, oo bilaabay inay ku adeegtaan 7 xarumood oo kala duwan oo ku yaal Ankara, saacadaha hoos ku xusan.
Xarumaha Waxqabadka AnkaraCard
Xarunta Farsamaynta Kaarka Kızılaye (Balanta)
cinwaanka: Gudaha K Stationzılay Station, Hürriyet Square Route No: 1/99 Çankaya / Ankara
Saacadaha shaqada: Maalmaha shaqada: 08:00 - 18:00
Sabtida: 09: 00 - 18: 00
Xarunta Farsamaynta Kaarka Beşevlere (Ballan)
cinwaanka: Saldhigga Beşevler gudaha, Kümeevler Route No: 8 Çankaya / Ankara
Saacadaha shaqada: Maalmaha shaqada: 08:00 - 17:00
Sabtida: 09: 00 - 17: 00
Xarunta Howlgalka EGO
cinwaanka: Emniyet Mah. Hipodrom Cad. Maya: 5 A Blok Yenimahalle / Ankara
Sabti-Axad (Sabti - Axad): xiran
Xarunta Farsamaynta Guuritaanka ee Dikimevi
cinwaanka: Saldhigga Dikimevi Cemal Gürsel Cad. Çıkışı (Xarunta Kaadhadhka Kaadhadhka)
Xarunta Hawlgalka Akköprü
Cinwaanka: Ka bixitaanka Badbaadada Saldhigga ee Akköprü (Xarunta Kaadhadhka Kaadhadhka)
Saacadaha shaqada: Maalmaha shaqada: 09:00 - 17:00
Sabtida: 10: 00 - 17: 00
Waad ka iibsan kartaa AnkaraCard cusub ama lacag ayaad ku ridi kartaa AnkaraCard dhammaan goobaha shaqada oo ku yaal meelo badan oo kala duwan oo Ankara ah halkaas oo aad ku aragto sumadda “AnkaraKart Refill and Sales Point”.
Buuxinta iyo Iibiyaasha AnkaraKart
Aaladda SmartBanko (Liiska SmartBanko iyo MiniBanko)
Tam dhimis BILAASH GUUD BADBAADADA BADBAADADA
Khidmada Fudud ee Hal Kaadhka ah £ 3,25 £ 1,75 £ 1,60 £ 0,75
Bixinta Tigidhada Hal Guddi Bixinta £ 4,00 - - -
Xiriirka NFC £ 4,00 - - -
Fadhiga kaadhka amaahda £ 4,00 - - -
Kesän ° PPE-PRAO Ankara 15,50 4,00
ÇANDIR Ankara 14,00 6,75
GÖLBAŞI-Selametli 4,25 1,75
Malabka-ANKARA 9,50 5,00
Malabka-Asti 8,00 4,00
AYAÅ -ANKARA 7,25 3,75
AYAÅ -SÄ ° NCAN 3,25 1,75
Download Y.ÇAV-ANKARA 7,25 3,00
KARAALÄ ° -ANKARA 7,25 3,00
KARAALÄ ° -GÃ - LBAÅ I 3,25 1,75
GÖLBAŞI-Bezirhane 4,25 1,75
BASICÄ ° -KORU METRO Ä ° ST. 3,75 2,00
KU SALAYSAN-SİNCAN 5,25 2,20
OYA Danish-ANKARA 8,25 3,75
YEÅ Å ° LDERE-ANKARA 4,75 1,75
ELMADAG-ANKARA 4,75 2,25
Soocaa ° RKELÄ ° -ANKARA 4,50 2,25
OYA by-GÖLBAŞI 4,25 2,00
BAR madaxtooyada 3,75 2,00
Download Y.ÇAV-ul 3,25 1,75
ELMADAÄ -LALAHAN 3,25 1,75
ELMADAÄ -HASANOÄ LAN 3,25 1,75
CANILLI-AYAŞ 3,25 1,75
Sinanlı of-AYAŞ 2,25 1,00
UBUK AKKUZULU MH.-SIHHIYE 4,50 2,25
AKYURT KIZIK MH.-BALIKHÄ ° SAR-BÃœÄ DÃœZ-SIHHIYE 4,25 2,25
BAR-umadii-SIHHIYE-BEŞEVLER 4,50 2,25
GÖLBAŞI-Velihimmetli 3,25 1,75
GÖLBAŞI-aan KARAGEDİK 3,25 1,75
AFÅ AR YENÄ ° KÃ - Y-ANKARA 9,25 5,25
BAR-HASKÖY-DÖRTYOL-sites 4,50 3,00
UBUK-İVEDİK OSB-OSTİM 5,25 4,75
CUDURKA ° -Ä ° VEDÄ ° K OSB-OSTÄ ° M 6,50 4,50
AKYURT-Ä ° VEDÄ ° K OSB-OSTÄ ° M 4,75 3,25
AKYURT-HASKÖY-DORTYOL-GOOBAHA 4,50 3,25
Bala-Abazlı-GÖLBAŞI 4,25 2,25
KIZILCAHAMAM-umadii-SIHHIYE 9,25 5,00
KAHRAMANKAZ ku-SIHHIYE 5,00 2,25
Xirmooyinka buuxa ee loo yaqaan 'Motherboards', ugu badnaan 75 wareejin ayaa la bixiyaa 2 daqiiqo gudahood (marka laga reebo khadadka khaaska ah), khidmada wareejinta waa 1,60 TL.
Xilliyada loo yaqaan 'Motherboards' ka dhimis, ugu badnaan 75 wareejin ayaa la bixiyaa 2 daqiiqo gudahood (marka laga reebo khadadka gaarka ah), khidmada wareejinta waa 0,75 TL.
FARSAMADA ° K BÄ ° NÄ ° Å ÃœCRETLER ° Tam dhimis
TE KUGU DIIWAAN GUDBINTA CARRUURTA CUSUB 'K KÄ NÄ ° Å' RECRETÄ ° £ 1,00 £ 1,00
U Bedelaada SOO JOOJINTA XARUNTA NETBOOD METRO ST ° £ 1,50 £ 0,75
Wareejinta gawaarida fiilada waa 1 TL 60 saac (0 daqiiqo) ka dib isticmaalka Ankaray Metro.
Tigidhada Moobilada (Tigidhada Ankara) Muddada waxay ka bilaabatay Ankara
3. Maydhayaasha Gawaarida ee Maddaarka
Xagee iyo Sida Loo Helo Samkart
Gaadiidka Tareenka Baasaska Baasuukha
Halkee ayuu madaxweyne Gökgic jecel yahay baabuurtiisa?